Zodiac nke Machị 3 - Omume Horoscope zuru ezu - Akara Zodiac
Isi Akara Zodiac March 3 Zodiac bụ Pisces - --dị Horoscope zuru ezu
March 3 Zodiac bụ Pisces - --dị Horoscope zuru ezu
Ihe akara zodiac maka Machị 3 bụ Pisces.
Akara Astrological: Azụ . Ihe nnọchianya a na-egosi ihe dị mgbagwoju anya nke jupụtara na nghọta, ntụkwasị obi na ụzọ dị mgbagwoju anya maka ihe gbasara ndụ. Ọ bụ njirimara maka ndị amụrụ n’etiti February 19 na March 20 n’okpuru akara zodiac Pisces.
Ihe Njikọ Pisces bụ otu n’ime kpakpando iri na abụọ nke zodiac, na-ekpuchi ohere ndị a na-ahụ anya n’etiti + 90 Celsius na -65 Celsius. Ọ dị n'agbata Aquarius na West na Aries na East na mpaghara 889 square degrees. A na-akpọ kpakpando na-egbuke egbuke nke Van Maanen.
Na Gris a na-akpọ ya Ihthis na France na-akpọ Poissons mana mbido Latin nke akara zodiac ụbọchị atọ, Azụcha dị na aha Pisces.
akara zodiac maka october 4
Ihe mgbaàmà na-emegide: Virgo. Mkpakọrịta dị n'etiti Pisces na Virgo ihe ịrịba ama anyanwụ ka a na-ahụta ka ihe atụ na akara ngosi na-egosi ọchị na nkwukọrịta gbara ya gburugburu.
Moddịl: Ekwentị. Omume a na-egosi ọdịdị amamihe nke ndị amụrụ na Machị 3 na nghọta nyocha ha na ịkwụ ọtọ na-ewere ndụ dị ka ọ dị.
Ulinglọ ụlọ: Lọ nke iri na abụọ . Lọ a na-achịkwa mmeghari ohuru na mmecha nke ihe niile. Ọ na-egosi ike mmadụ iji bido na-adịgide adịgide wee kpokọta ike ya site n'ihe ọmụma na ahụmịhe gara aga.
Isi na-achị: Neptune . E kwuru na ahụ nke eluigwe a na-emetụta etiti na enyemaka. Neptune bụ otu ihe ahụ Poseidon bụ chi Greek nke osimiri. Neptune na-egosikwa ịdị mfe na ndụ nke ụmụ amaala a.
Mmewere: Mmiri . Ihe a na-egosi maka ọdịdị dị omimi na nke miri emi nke ndị amụrụ n'okpuru zodiac 3 nke ọnwa. Ọtụtụ mgbe ha na-enwe obi ọma ma na-ekpo ọkụ ma ha yikwara ka ha na-aga nrugharị dịka ihe mmetụtara ha.
Bọchị obi ụtọ: Tọsde . Bọchị a dị n’okpuru ọchịchị Jupita ma gosipụta mgbasa na nnabata. Ọ na-achọpụta na ọdịdị nzuzo nke ụmụ amaala Pisces.
Nọmba ihu ọma: 6, 8, 11, 12, 22.
Motto: 'Ekwere m!'
Ozi ndi ozo na March 3 Zodiac n'okpuru ▼
Ihe maka Ọrịa Cancer
Mkpakọrịta nwoke na nwoke Scorpio: You Nwere Ihe Ọ Na-ewe?
ihe akara bu Jenụwarị 2
Zodiac 20 February nke ndakọrịta akara ndakọrịta
nwoke aquarius na nwanyi nwanyi aquarius
esi eme ka nwoke scorpio wee daa n'ịhụnanya
esi arata nwanyị nwere obi ụtọ